Tụọ egwu Chineke (1-7)
Ndị isi na-ahụ ihe ndị nọ n’okpuru ha na-eme (8, 9)
Akụnụba abaghị uru (10-20)
Ego anaghị eju ndị hụrụ ego n’anya afọ (10)
Ụra onye na-eje ozi na-atọ ya ụtọ (12)
5 Mgbe ọ bụla ị na-aga n’ụlọ ezi Chineke, kpachara anya.+ Ọ ka mma ịga gee ntị n’ihe a na-ekwu,+ kama ịchụ àjà otú ndị nzuzu na-achụ,+ n’ihi na ha amaghị na ihe ha na-eme bụ ihe ọjọọ. 2 Abụla onye ọ na-adị ngwa ngwa ikwu okwu, ekwukwala okwu n’ihu ezi Chineke n’echeghị echiche,+ n’ihi na ezi Chineke nọ n’eluigwe, ma ị nọ n’ụwa. Ọ bụ ya mere na i kwesịghị ikwu ọtụtụ okwu.+ 3 N’ihi na ọ bụ ọtụtụ ihe mmadụ na-eche na-eme ka ọ rọwa nrọ,+ ọ bụkwa ekwurekwu na-eme ka a nụ olu onye nzuzu.+ 4 Mgbe ọ bụla i kwere Chineke nkwa, egbula oge imezu ya,+ n’ihi na ihe ndị nzuzu anaghị amasị ya.+ Mezuo nkwa i kwere.+ 5 Ọ ka mma na i kweghị nkwa kama ị ga-ekwe nkwa ma ghara imezu ya.+ 6 Ekwela ka ọnụ gị mee ka i* mehie,+ ekwukwala n’ihu mmụọ ozi* na i mere ya n’amaghị ụma.+ Gịnị mere ị ga-eji kwuo ihe ga-akpasu ezi Chineke iwe, nke ga-eme ka ọ laa ọrụ aka gị n’iyi?+ 7 N’ihi na otú ahụ ọtụtụ ihe mmadụ na-eche si eme ka ọ rọwa nrọ,+ ka ekwurekwu sikwa eme ka mmadụ na-ekwu ihe na-enweghị isi. Kama, tụọ egwu ezi Chineke.+ 8 Ọ bụrụ na ị hụ ka a na-emegbu ogbenye, hụkwa ka a na-ekpe ikpe na-ezighị ezi ma na-eme ihe ọjọọ n’ógbè unu, ya ejula gị anya.+ N’ihi na onye ka onyeisi ahụ na-ahụ ihe onyeisi ahụ na-eme, e nwekwara ndị ọzọ ka ha elu. 9 A na-ekere ha niile ihe ala na-emepụta. Ọ bụkwa n’ubi ka e si enweta ihe a na-enye eze.+ 10 Ọlaọcha agaghị eju onye hụrụ ọlaọcha n’anya afọ, akụ̀ agaghịkwa eju onye hụrụ akụnụba n’anya afọ.+ Ihe a bụkwa ihe efu.+ 11 Akụnụba hikwuo nne, ndị na-eri ya na-adịkwu ọtụtụ.+ Olee uru ọ baara onye nwe ya, ma ọ́ bụghị naanị ịnọ na-ele ya anya?+ 12 Ụra onye na-eje ozi na-atọ ya ụtọ, ma ihe ọ na-eri ò buru ibu ma ò pere mpe. Ma ọtụtụ ihe ọgaranya nwere anaghị ekwe ya rahụ ụra. 13 E nwere ihe jọgburu onwe ya* m hụrụla n’ụwa:* akụnụba mmadụ kpakọtara dowe kpataara ya nsogbu. 14 Akụnụba ahụ lara n’iyi maka na ahịa ọ zụrụ ghọrọ ya ahịa. Mgbe onye ahụ mụtaziri nwa, e nweghịzi ihe o nwere.+ 15 Otú ahụ mmadụ na-agba aka* si n’afọ nne ya pụta, ka ọ ga-agba aka laa.+ E nweghịkwa ihe ọ bụla ọ ga-ewere laa n’agbanyeghị ọrụ niile ọ rụsiri ike.+ 16 Ihe a jọgbukwara onwe ya:* Otú mmadụ dị mgbe a mụrụ ya ka ọ ga-adị laa. Oleekwanụ uru onye nọ na-agbasi mbọ ike na-achụ ifufe ritere?+ 17 Kwa ụbọchị, obi anaghị adị ya mma,* ike ụwa na-agwụkwa ya. Ọ na-arịa ọrịa, iwe na-ejukwa ya obi.+ 18 Ahụrụ m na ihe a kwesịrị ekwesị ma dị mma: na mmadụ kwesịrị iri ihe, ṅụọ mmanya ma na-enwe obi ụtọ maka ọrụ niile ọ na-arụsi ike+ n’ụwa* n’ụbọchị ole na ole ezi Chineke nyere ya ka o bie ndụ, n’ihi na ọ bụ ya bụ ụgwọ ọrụ ya.*+ 19 Ihe ọzọkwa bụ na ọ bụrụ na ezi Chineke enye mmadụ akụnụba+ ma mee ka onye ahụ nwee ike iri ya, onye ahụ kwesịrị ịnara ụgwọ ọrụ ya* ma na-enwe obi ụtọ n’ihi ọrụ ọ na-arụsi ike. Ihe a bụ onyinye Chineke.+ 20 N’ihi na ọ gaghịdị ama* na ụbọchị ndụ ya na-agwụ n’ike n’ike, maka na ezi Chineke na-eme ka aṅụrị ju ya obi.+
^ Na Hibru, “ahụ́ gị.”
^ Ma ọ bụ “onye ozi.”
^ Ma ọ bụ “nnukwu ọdachi.”
^ Na Hibru, “na-agba ọtọ.”
^ Ma ọ bụ “bụkwa nnukwu ọdachi.”
^ Na Hibru, “ọ na-eri nri n’ọchịchịrị.”
^ Ma ọ bụ “echeta.”